Mashruuc Waxbarashadda lagu hormarinayo oo Garoowe laga bilaabay – Radio Daljir
Diseembar 12, 2012 4:56 b 0
Garoowe, Dec 12, Mashruucan oo bilow u ah deeq lacageed oo Soomaaliya ay ugu deeqeen Dawladaha Yurub ayaa maanta lagu daah furay magaalada Garoowe ee caasimadda Dawladda Puntland.
Xaflad si heer sare ah loosoo agaasimey oo lagu qabtay xarunta dhexe ee Wasaaradda Waxbarashadda Dawlada Puntland ee magaalada Garoowe, ayaa waxaa kasoo qayb galay ?Madaxweyne kuxigeenka Puntland Jen Cabdisamed Cali Shire, xubno ka tirsan Golaha Wasiiradda, Xildhibaano Baarlamaan, iyo hay’ado caalami ah.
Shirkan ayaa lagu daah furay mashruuc Waxbarasho oo socon doona mudo Sadex sano ah kaasoo laga hirgelinayo 12 degmo oo kuyaala Puntland kuwaasoo laga horumarin doono, Dugsiyada Sare, H/dhexe, goobaha Waxbarashadda dad-ban iyo hagaajinta xarunta dhexe ee Wasaaradda Waxbarashadda.
Markii kulanku soo dhamaaday Waxaa si wada jir ah shir Saxaafadeed u qabtay Wasiirka Waxbarashadda Puntland MD Cabdi Faarax Siciid ‘Juxa’ iyo madaxa arimaha Bulshada ee midowga Yurub ?haweeneyda lagu magacaabo ?Alisepet.
Waxay sheegeen in mashruucan uu ku bixidoono dhaqaale dhan 9 milyan oo dollar ka Maraykanka ah.